Israel oo duqaysay Xafiis Turkiga ku leeyahay Qaza
Militariga iyo Mucaaradka Suudaan oo dhisay Gole Madaxbanaan
Axmed Madoobe oo la kulmay xildhibaanada cusub ee la isku haysto
Ebola oo Daawo loo helay
Wararkii ugu dambeeyay doorashada Jubaland
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Sunday, 05 May 2019 01:44 PM / 0 Comment / 33 views
Israa’iil iyo mintidiinta reer Falasdhiin ee ka hawlgala marinka Qasa ayaa mid waliba xoojiya weerarka uu ku hayo dhanka kale, waana markii ugu horreysay oo gantaalo aad u tiro badan ay weydaarsadaan.
Mintidiinta reer Falasdhiin ayaa tan iyo shalay oo Sabti ahayd in kabadan 430 gantaal waxa ay ku tuureen gudaha Israa’iil.
Arrintaasi ayaa waxa ay sababtay in Israa’iil ay adeegsato awood oo cirka iyo dhulkuba ay ka duqeyso deegaannada ku yaal dhulka reer Falasdhiin.
Israa’iil waxa ay sheegtay in inta badan gantaaladaasi uu qabtay qalabkeeda difaaca gantaalada balse hal nin uu ka dhintay.
Firirka gantaalada ka imaanaya dhanka Qasa ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo Israa’iili ah, halka rasaasta Israa’iil ay galaafatay nolasha afar qof oo reer Falasdhiin ah oo ay ku jirto haweeney iyo gabar yar oo ay dhashay, sida ay sheegayaan mas’uuliyiinta Qasa.
Hase yeeshee, Israa’iil ayaa sheegtay in haweeneydaasi iyo gabadheeda ay ku dhinteen gantaal ay soo direen mintidiinta reer Falasdhiin, kaasi oo ku dhacay meel ka sokeysa bartilmaameedkiisa.
Rabshadahan cusub ayaa yimid ka dib xabbad joojin ay dhiancyadan ku heshiiyeen ka hor doorashadii Israa’iil ka dhacay bishii Abriil.
Afar qof oo reer Falasdhiin ah oo ay ku jiraan laba ka mid ah dagaalyahannada ururka Xamaas ayaa Jimcihii la soo dhaafay la dilay ka dib markii laba askari oo ka tirsan milatariga Israa’iil lagu dhaawacay weerar toogasho ah.
Rabshadahan ayaa ka dhigan in colaadda u dhaxeysa Israa’iil iyo kooxaha reer Falasdhiin ay sii xoogeysanayso, inkastoo ay jiraan dedaallo ay wadaan Masar iyo Qaramada Midoobey, kuwaasi oo looga gol-leeyahay sidii xabbad joojin waarta loo dhex dhigi lahaa labadan dhinac.
Hoggaamiyeyaasha milatariga Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa dhisay gole madaxbannaan oo hoggaamiya...
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa xalay Kulan casho sharaf...
Waxaa mar dhow suurtagal ah in laga hortago oo la daaweyo Cudurka Epola ,ka dib markii tijaabooyin la...
Magaalada Kismaayo waxaa Caawa ka bilowday Ololaha doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo...
Hoggaamiyeyaasha milatariga Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa dhisay gole madaxbannaan... Read more →
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa... Read more →
Waxaa mar dhow suurtagal ah in laga hortago oo la... Read more →
Magaalada Kismaayo waxaa Caawa ka bilowday Ololaha doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka... Read more →
Shirkan oo ay martigalisay Dowladda Rwanda waxaa soo qaban-qaabiyay Bankiga... Read more →
Mucaaradka Jubaland oo Guddi Doorasho ku dhawaaqay
Xubnaha la Magac baxay golaha musharixiinta badbaadada Dowlad Goboleedka Jubbaland... Read more →
AMISOM oo la wareegaysa xarumaha Doorashada Jubaland
August 6, 2019 7:25 am
Magalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose waxaa saakay laga... Read more →
Shirka Afhayeenada Baarlamaanada Afrika oo ka furmaya K/Afrika
Magaalada Johannesburg ee Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa in... Read more →
Aas Qaran oo Moqdisho loogu sameeyay Guddoomiyihii Gobalka Banaadir (Sawiro)
August 4, 2019 8:55 am
Waxaa Maanta Aas Qaran Magalada Muqdisho loogu sameeyay Guddoomiyihii Gobolkan... Read more →
Maraykanka: 20 qof lagu dilay toogasho ka dhacday xarun ganacsi
August 4, 2019 7:50 am
Ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay weerar toogasha ah... Read more →